"Miverena ianao...; tsy hampanjombona ny tavako aminareo Aho fa mamindra fo Aho, hoy Jehovah, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Kanefa kosa ekeo ny helokao." Jeremia 3:12,13
"Ry Jehovah ô, na dia miampanga anay aza ny helokay, miasà ihany Ianao noho ny anaranao; fa be ny fiodinanay." Jeremia 14:7
1 Samoela 30:1-7
Diso i Davida nikambana tamin'ny fahavalon'ny fireneny, izy izay ho mpanjakan'ny Israely. Rehefa niverina tao amin'ny tanàna izay nonenany ary tsy tokony nialany izy, dia zava-doza no hitany: norobaina ny tanàna, lasa babo ny vehivavy sy ny ankizy. Nikasa ny hitora-bato azy ny miaramilany... Fotoana tena nanjombona izany teo amin'ny fiainan'ity lehilahin'ny finoana ity! "Ary ory indrindra Davida", hoy ny tantara. "Fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'i Jehovah Andriamaniny". Nahazo vahana indray ny finoany, ary novalian'Andriamanitra. Nanafaka tanteraka an'i Davida Izy. Niverina taminy ny zavatra rehetra: ny vadiny, ny zanany ary ny fananany, dia ny azy sy ny an'ireo miaramilany.
Tao anatin'izany toejavatra izany dia ho afaka nanao anakampo i Davida hoe: «Sahaza ho ahy izao», ka namoy fo... Tsy fahadisoany tokoa ve no nahatonga azy ho amin'izao toerana izao? Nizaka ny vokatry ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra izy. Mbola afaka manantena famonjena avy amin'Andriamanitrave izy? Fa ao anatin'izao andro fahoriana izao indrindra no tena ilàn'i Davida maika an'Andriamanitra, dia Ilay "Andriamaniny"! Izy no antsoiny am-pinoana, ary tsy diso fanantenana izy.
Ry mpino, tsy maintsy miatrika ny vokatry ny fahotantsika ihany koa isika, indraindray. Raha hararaotin'i Satana izany mba hanosehana antsika hamoy fo, toa an'i Davida, dia tohero ireny hevitra mampanjombona ireny, ary aoka isika hitodika am-pinoana amin'Andriamanitra. Tsy hanosi-bohon-tanana antsika na oviana na oviana Izy. Izy no Andriamanitry ny famelan-keloka, Andriamanitry ny fanantenana, Andriamanitry ny fahasoavana rehetra!